ဧည့်သည်များအတွက် သိမှတ်ဖွယ်ရာ | Shwedagon Pagoda
မနက် ၄နာရီမှ ည ၁၀ နာရီထိ။ အောက်ဖော်ပြပါနေ့ရက်များမှလွဲ၍ ၂၄နာရီ ပတ်လုံး ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။
Visitor Center ဖွင့်ချိန်
Copyright ©2018. shwedagonpagoda.com.mm. All rights reserved.